Isihloko esingokomlando, esithandwa kakhulu ngabaphathi baseHollywood, sesivele sibangele ukuhlukumeza okuthile kumbukeli waseRashiya. Angikwazi ukufakazela izwe lonke, ngizosho kuphela ngomfowethu. Yebo, siyathanda kangangokuthi, ngokuqinisekile, kumininingwane encane kakhulu. Kuyinto efiselekayo ukuthi abantu abathintekayo basebenze kule filimu, abahloniphayo futhi baqonde izenzakalo zomlando ezivezwe ku-cinema. Kodwa. Kodwa futhi, kodwa. Ngokuvamile, i-Hollywood isinika izinto zobuciko, ezithandeka kakhulu ngemiphumela ekhethekile, izindebe zomzimba nezindwangu zamakhosikazi ezisezintambo, amehlo ahlobisa ama-smart ama-smart and a hint kancane amaqiniso omlando.
Lesi sikhathi i-movie ephathelene "Enye yohlobo lwe-Boleyns" ikhishwe kuma-skrini. Yebo, yebo. Awuzange uphendule kabi. UHenry VIII okhanga kakhulu wanikeza abenzi befilimu besikhathi esibucayi isihloko esicebile sezinguqulo zesikrini.
U-Natalie Portman, engxenyeni yesilingo esiyinkimbinkimbi seNkosi u-Anne Boleyn, wayephezu komugqa omude wabanduleli, phakathi kwawo kwakuwukugqotshwa kwama-crinoline kaVanessa Redgrave, uCharlotte Rampling nabanye abaningi abenza le ndima.
Indaba ethandanayo yothando, ukukhwabanisa nokukhwabanisa manje kwakhiqizwa ngaphansi koqondiso lukaChachwick, ochwepheshe emasakeni. Ihlelwe ngokuhlelekile futhi ngokucacile umugqa womlando ovamile, izinhlamvu zezinhlamvu ezififiwe, futhi ngokuvamile izindawo ezihlaselwe ngokuphelele. Kodwa izintshisekelo nezinhlelo ezinhle ngokumelene nesizinda samafu zinikezwa okuthandwa kakhulu.
Sindisa indawo ebusweni ebusweni bukaScarlett Johanson, obesebenzisa ifilimu ngokucophelela edlala ukuthobeka, umusa nokuhlonipha kanye noNatalie Portman, umdlalo omibalabala ogqokisa ukungabi nobuntu kumlingiswa wakhe. U-Eric Bana, okwenze uHenry VIII abe ngumuntu omuhle ngokungalindelekile, uphuthuma lonke ifilimu, ehlanganyela kuphela ezindabeni zobulili, empeleni engeyona iqiniso lezomlando. Umndeni ohloniphekile uphenduka ngokubeka amadodakazi ngaphansi kwenkosi. Omunye wabo uqala ukukhohlisa noma ubenesiphukuphuku kunodadewabo omuhle, othintekayo futhi anganikeli inkosi, enesifo esibi kakhulu se-sperm motoxicosis futhi enqaba ngokuphelele ingqondo. Lapha uhleka, futhi iziphepho ze-hormonal egazini likaHenry VIII zishintsha inkambo yomlando waseNgilandi. Kanye naso sonke.
Uma uphumule kusengaphambili futhi uqaphele ukuthi umqondisi empeleni akaqhubi ngisho nokudubula ifilimu ngokusekelwe kumaqiniso omlando, kodwa uyaqhubeka esebenza nge-soap opera, futhi umlobi obhaliwe udlala ngokuzikhandla nayo, ke-ke. Lokho kuvela isithombe esihle kakhulu. Yebo, futhi abalingisi basindisa isimo ngokugcwele amandla amakhono abo - bayamjabulisa ukubuka. Into esemqoka akukona ukulalela umbhalo futhi ungacabangi ngawo, ngoba izinsipho ze-soap azidalwanga ukuze ziboniswe. Ngokuphambene nalokho, ukuphumula ubuchopho. Ngaphezu kwalokho, umphumela wephrojekthi "Omunye wohlobo lukaBoleyn" luhle kakhulu futhi lunomusa kumnandi. Uma uzizwa ungazizwa okungajwayelekile emva kokubuka - ungamangali. Kuyinto nje inqwaba ye-soapy foam.
Izithelo zonyaka ozayo we-fashionistas
Indlela yokuhlela i-bachelorette party?
Ukuphila kuhle Kate Middleton
Indlela yokwahlukanisa amafutha okuqala avela ku-fake: sifunda ukukhetha amakha amahle
Amakhowe agcwele amathe utamatisi omisiwe
Umphumela wemisebenzi yelanga empilo yabantu
Kuzoba yini ngonyaka ka-2018 weTaurus Dogs